iPhone အတွက်နည်းပြသင်ခန်းစာများ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Actualidad အိုင်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်သည်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ အသစ်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိလျှင်ပင်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုအပြည့်အဝရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာသင်တစ်ဖွဲ့လုံးရပါလိမ့်မယ် လက်စွဲစာအုပ်များနှင့်သင်ခန်းစာများစုဆောင်းခြင်း Jailbreak၊ iOS သို့မဟုတ်အခြားကိစ္စရပ်များအကြောင်းပြောဆိုသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ပုံများဖြင့်သင်ပေးလိမ့်မည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာများကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည် သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်မဆုံးရှုံးစေရန်အလွန်ပြည့်စုံခြင်း။
သင့်ကလေးများ၏ iPhone နှင့် iPad တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အကြောင်းအရာများကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်မှာ လွယ်ကူပါသည်။
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
iPhone ၊ iPad ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်းတွေက ကလေးလေးတွေရဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့အထဲမှာပါ...
WhatsApp တွင် Reactions ကိုအသုံးပြုနည်း
WhatsApp သည် စာရေးရန်မလိုဘဲ သင့်ထံသို့ ပေးပို့လာသော မက်ဆေ့ချ်များကို တုံ့ပြန်နိုင်စေမည့် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
သင်၏ AirTag ၏ဘက်ထရီကိုစစ်ဆေးနည်း
ဤဆောင်းပါးတွင် iPhone တွင် အီမိုတီကွန်များ မပေါ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများကို သင့်အား ပြသပါမည်။ အီမိုတီကွန်များသည်...
သင်၏ iPhone ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအားသွင်းနိုင်စေရန် MagSafe ဘက်ထရီကို အဆင့်မြှင့်နည်း
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
Apple သည် ၎င်း၏ MagSafe ဘက်ထရီအတွက် အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အားသွင်းခြင်းပါဝါကို ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သည်...
သင့် iPhone တွင် ပေါ်လာသည့် တည်နေရာသင်္ကေတကို စီမံခန့်ခွဲနည်း
por အဲလက်စ်ဗစ်ဆန်တီ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
သင့် iPhone ၏ထိပ်တွင် တည်နေရာသင်္ကေတကို အခါအားလျော်စွာ ပေါ်လာသည်ကို သင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်မှာ သေချာပါသည်။
iPhone ရှိ အက်ပ်အိုင်ကွန်များကို မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
iPhone ပေါ်ရှိ အက်ပ်များ၏ အိုင်ကွန်များကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်စေသည်...
iPhone တွင် အသိပေးချက်များကို မည်သို့ပိတ်ရမည်နည်း
ဤဆောင်းပါးတွင် iPhone၊ iPad နှင့် iPod touch တွင် အသိပေးချက်များကို မည်သို့ပိတ်ရမည်ကို သင့်အား ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသိပေးချက်များ…
AirDrop ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ အဲဒါကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ရယူမလဲ။
အကယ်၍ သင်သည် iPhone သို့မဟုတ် iPad အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိနေပြီဆိုလျှင်၊ AirDrop သည် ဘာလဲဟု သင်သိချင်နေပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာလည်း…
သင့် iPhone ကို format လုပ်နည်း
မင်းရဲ့ iPhone၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်ပေမဲ့...